FITSARAM-BAHOAKA :: Lehilahy nodoran’ny fokonolona • AoRaha
FITSARAM-BAHOAKA Lehilahy nodoran’ny fokonolona
Taorian’ilay trangana fitsaram-bahoaka nahafatesana roa lahy voalaza ho olon-dratsy tao amin’ny kaominina ambani­vohitra Ambohimasina Betafo, dia jiolahy iray ihany koa no matin’ny mponina tao amin’ny kaominina ambanivohitra Soavina, distrikan’i Betafo ihany.
Efa-dahy izy ireo no nikasa handroba tokantrano iray tao an-tampon-tanànan’i Soavina, ny alakamisy lasa teo. Nikasa ny hiditra amboletra avy any an-davarangana izy ireo kanjo tsy nampoiziny fa efa nahare ny fiakarany sady efa nivonona hiatrika azy ireo ny tompon-trano. Avy hatrany dia notsenain’itsy farany tamin’ny kapoka kibay ilay lehilahy tafakatra voalohany. Torana tsy nahatsiaro tena teo io. Vaky nandositra kosa ireo namany telo hafa raha vao nahare ny antso vonjy nataon’ny tao an-trano.
Vory marobe ny fokonolona no sady samy nanao izay ho afany tamin’ny fikasihan-tanana an’ilay lehilahy voakapoky ny tompon-trano. Voalaza fa avy any Manohisoa izy. Tsy namelan’izy ireo raha tsy tapitra ny ainy. Rehefa maty dia nodoran’ny fokonolona ka lasa lavenona tanteraka ny razana
Vaky boky Hanampy an’i Madagasikara amin’ny fivadihana nomerika i Inde
Fanaparitahana fitaovam-piadiana Tratra ilay lehilahy mpanamboatra sady mpampanofa basy
ENDRIKA KOLIKOLY :: Miantso fifanampiana ny fibaikoana ny Zandarimaria
FAHASALAMANA HO AN’NY DAHOLOBE :: Olona sahirana an’alina no efa misitraka fitsaboana maimaim-poana